UJeremy Mix ujabulisa intombazane yakhe ecebile ekuphileni okulula: umbhangqwana udle ibha yokudla
Izinkanyezi I-Star News
Kusele ezinyangeni ezimbili ezedlule igama lomfanekiso oneminyaka engu-33 ubudala, uJeremy Mix, owadume ngobugebengu bakhe obudlulayo nobugebengu obuya e-Olympus, ongekho emaphepheni amaphephandaba. Iphutha lazo zonke kwakungukungathengiswa komkakhe, uMelissa, nezingane ezincane nabacebile uCloe Greene, umsizi wombuso omkhulu okuthiwa i-Topshop. Emva kwalokhu indaba ekhanyayo ixoxwa yibo bonke abangenabuvi, uJeremy ukhohliwe, kodwa namuhla igama lakhe libuye libuyele emakhasini angaphambili emaphephandaba.
Uxube noGreen bavakashele ukudla okusheshayo kokudla
Naphezu kokuthi amathuba okwenyuka kwezeMeek manje ayenyuka, futhi ngisho nangaphezulu, lapho umthandi wakhe eseduze naye, uJeremy akakhohlwa ukuthi kunezinto ezingabizi kakhulu ekuphileni. Ngakho-ke, isibonelo, namhlanje, i-Mix and Green ibonwe ku-cafe eshibhile, lapho ikhonza "ukudla okulimazayo". Kwakuwumphumela wokubamba ama-burgers namaFries amafriji ukuthi imodeli edumile yabonwa i-paparazzi. Ngokuqondene nomngane wakhe, uCloe akazange abheke ngokuqondile umlingani wakhe, ngenkathi ejabulela ukudla.
Chloe Green kanye noJeremy Mix esidlweni
Ngokuvamile, ngemuva kokuthi izithombe zabathandi zifike ku-inthanethi, ukuxhumana nomphakathi kwavela ekuphazamiseni ngokuphathelene nobuhlobo phakathi kwe-Mix noGreen. Nakhu okushiwo abalandeli ngabo nge-intanethi: "Into engikwazi ukuyiqonda, ingabe baxabana? Babheka njengokungathi uthando seludlulile kakade, "" Kubonakala kimi ukuthi encwadini yabo inoveli kuye kwavela umthamo omnyama. Kubonakala sengathi uJeremy noCloe babengafani neze ngenyanga eyedlule, "Ngeke kusimangale uma behlukana maduzane. I-Green and Mix ihluke ngokuphelele futhi ikhulile ezimweni ezahlukene. Yini laba bantu abangaba nayo? ", Njll.
U-Chloe Green okhulelwe ulungiselela umshado noJeremy Mix
Umkami uJeremy Mix ubeke amazwana ngokomzwelo ngendaba yakhe noCloe Green
UChloe Greene uhlangane nomndeni "wecala elihle kakhulu": icala lomshado?
Ngesidlangalaleni, uJeremy noCloe bahleka ngokumnandi
Ngemuva kokuthi ama-Meeks eseqedile ukuthatha abagibeli, lo mbhangqwana washiya i-cafe, lapho abalandeli abaningana bagijima khona. Ngokubukeka kwabo phakathi kwabathandi abathintekayo be-metamorphoses kwenzeka, okwakubangele ukuhlangana kwamathenda nokumomotheka. Okuyikho - akukacaci. Abanye abalandeli bavame ukuphikisa ukuthi uCloe akajabuli nokukhetha kukaJeremy ukuba adle isidlo sakusihlwa, kanti omunye uthi abathandi abathandana nabo bavame ukuxabana.
Naphezu kwalokhu, uJeremy noKloe baqhubeka beya emiphakathini yomphakathi njengombhangqwana. Ngesonto elidlule, uMeeks noGreene bajoyina iqembu elibizwa ngokuthi i-Princess Grace Awards Gala 2017, eyayibanjwe eBeverly Hills. Ngaphandle kwabathandi phambi kwabathwebuli bezithombe abavame futhi nomama uCloe - Tina Green. Owesifazane akavumanga nje indodakazi yakhe kuphela, kodwa isoka lakhe. Khona-ke, hhayi izintatheli noma izivakashi zobusuku, azikho izinkinga ku-pair-Mix-Green.
UJeremy Meeks, uTina Green noCloe Green
Biography of Pamela Anderson
Owesifazane owayengumhlengikazi uMelanie Brown wafaka icala ngokumelene nomculi enkantolo
UJenuary Jones ukhululekile futhi
ULisa Maria Presley noMichael Lockwood baxazulula izinkinga zezimali enkantolo
UBen Affleck uhlose ukubuyela kuJennifer Lopez
UJese James wakhononda ngokuphila okunzima futhi waxolisa kuSandra Bullock
I-Hayden Pannnetieri iphinde yaba nokucindezeleka?
Kuyini isikhubekiso phakathi kukaMegan Markle noCamilla Parker-Bowles?
Umshado useduzane nje kuphela: U-Angelina Jolie uphinde washada?
Isiqalekiso se-Trump Clan: Abesifazane Bomndeni Bahlukunyezwa Ukungajabuli
U-Ember Uhlukumezi noKara Delevin baya emhlanganweni wamfihlo
UTom Hiddleston uqinisekisile ukuhlukanisana no-Taylor Swift
UMichelle Williams nesoka lakhe elisha elingavamile eRome
URosie Huntington-Whiteley wabonakala kuqala ngemuva kokubeletha
I-Electrophoresis ekuguleni kwegazi
Iklabishi kuhhavini ye-microwave
Ukumisa Ukumisa okwesikhashana kwamakati
Indwangu emnyama ngezicathulo ezibomvu
Ukuvala isikhala somlomo
UKayi Gerber unesoka
Amafutha e-Sea-fuckthorn - izakhi zokwelapha
Demi Moore ngaphandle kokwenza
I-Sauce ye-pepper ehlanganisiwe
Amafashini eengubo zasehlobo kanye nama-sarafans
Isitayela se-Smart esicasulayo
Indlela yokuphatha ukukhwehlela ngamakhambi abantu?
Fukortzin for the newborns
I-ex-isoka uPofia Vergara wammangalela egameni lemibungu eqhwa
I-Cottage cheese rolls